Torkia: Taona fahatelo namonoana an’i Hrant Dink · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Janoary 2010 8:28 GMT
Telo taona androany, dia nisy nitifitra tamin'ny basy teo ivelan'ny birao fanaovan-gazety fiasany tany Istanbul, Torkia, ilay mpanao gazety Tiorka-Armeniana Hrant Dink . Tsy noraharahiana izy, nankahalain'ny Tiorka sy ny Armeniana noho ireo hafatra feno fandeferana sy fampihavanana nataony ho an'ny roa tonta fony fahavelony, Dink dia feon'ny mpampihavana ary olon'ny fohavanana ka izay no nahatonga an'i Ianyan hampitaha azy amin'ny Martin Luther King Jr […]
Nanana finoana sy tsy fisalasalana goavana izy ary tsy nanao rainazy mihitsy. Azony tsara fa ny fifampiresahana ihany no lalana tokana ho amin'ny fandriam-pahalemana. Izy no olona tokana sahy nanambara fa “tokony halevina any amin'ny 1915 metatra ambanin'ny tany any ny olana mamatotra an'i Tiorka sy Armenia”. Izy, tsy tahaka ireo olona hafa miaina sy miasa miaraka amin'ny Tiorka. zy no olona niezaka nanampina ny lavaka nanelanelana ny roa tonta vokatry ny tantara mampalahelo, olona nandroso hevitra fa ny fianakaviam-be Armeniana dia tokony hamafa ny fankahalany ny Tiorka ary tsy hijanona mihitsy miaro ny zon'olombelona. Ho an'i Dink, ny fankahalana sy ny herisetra dia mampitombo ny fanavakavahana. Ho azy, tsy tokony hiditra amin'izany mihitsy ny roa tonta. […]
[…] Misaotra anao nanao zava-dehibe, andraikitra nampandroso ny kolon-tsaina ikambanana. Ianao, ilay mpanelanelana, mpitondra faneva, sahy, ianao irery no antony mahatonga ahy hirehareha amin'ny maha Armeniana ahy sy maha mpanao gazety ahy.
Mandritra izany fotoana izany, mahatsiaro ilay andro nandreraka ny mpanao gazeety Tiorka ary milaza ny vokatry ny fanadihadihana tamin'ny namonoana azy ankehitriny.
[…] Aiza no misy antsika izao? Hita ve ny mpamono olona, efa nibaby ny helony ve izy ireo? Tsia. Namoaka ny vokatry ny fanadihadihana ny mpisolo vava an'i Hrant Dink, fanadihadihana izay tsy lasa lavitra fa teo amin'ny nanombohany ihany aloha hatreto. Hatramin'izao dia ilay nitifitra, Ogun Samasat, ihany aloha no migadra. Mahafantatra daholo ny rehetra hoe iza no tsy niraharaha ireo fampitahorana natao tamin'i Dink tamin'izy mbola velona, kanefa na dia izy ireo aza tsy miraharaha, mihamitombo hatrany ny zavatra hanamelohana azy ireo. Tompon'andraikitra amin'ity raharaha ity izy ireo, raha tsy hiteny afa-tsy ny mpitandro ny filaminana isika. Inona àry no azo tsoahina, izany hoe, amin'ny zavatra tahaka itony dia tsy misy olona sahy manameloka ny fitsarana manoloana vonoan'olona mahatsiravina tahaka izao.
Mandria am-piadanana ry Hrant.